I-5 Cozy Kildare Firesides Yokuvakashela Ubusika - IntoKildare
Couples, Ukudla nokuphuza, Christmas
Ubhiya, ukudla nomlilo odumayo - yini enye oyidingayo ukufudumeza amaphuphu kulo busika?
Ukuphumula ngomlilo ovulekile lapho kubanda ngaphandle kungumbono wethu wokuphuma okuhle ebusika ngakho-ke siqoqe imililo emihlanu yaseKildare esicabanga ukuthi kufanele uyizame.
Indawo yokuphumula ezungeze osofa abanethezekile futhi bathamele ukufudumala komlilo ovuthayo - le mililo ebabazekayo ikhalela ukuphathwa njengekhaya lakho elikude nekhaya.
Ingabe lena indawo yomlilo ebiza kakhulu e-Co Kildare? I K Club yazi indlela yokugubha uKhisimusi kanye kusihlwa okuphumuzayo emlilweni ngengilazi yewayini eline-mulled noma ushokoledi oshisayo kuzwakala njengezulu njengamanje.
Okuthunyelwe okwabiwe nguKillashee (@killasheehotel)
Awuzwa nje ukufudumala okuvela kulowo mlilo? Qoqa okwamantombazane ukuze uthole itiye lantambama lomkhosi futhi ubambe phambi kwakho I-Killashee umlilo opholile. Intambama kaKhisimusi ephelele echithiwe!
I-Kilteel Inn kaBrennan
IBrennans Kilteel Inn inaleya pub yase-Irish ethokomele futhi ngobusuku bemikhosi kaDisemba - yini enye ongayifunayo? Hamba ngephinti futhi cishe uzofuna ukuhlala amanye amahlanu. I-Brennan's in Kilteel ingase ibukeke ijwayelekile ngenxa yokusetshenziswa kwayo ukuqoshwa kohlelo lwe-Irish olushisa izikhotha oluthi 'Igazi' nokukhululwa okuzayo okuthi 'Harry Wild' okudlala u-Jane Seymour.
Okuthunyelwe okwabiwe nguHartes Of Kildare (@harteskildare)
Ngena ngaphakathi Hartes futhi bakhululeke emlilweni noma baphi bajabulele imenyu yabo eyingqayizivele equkethe ubhiya ophekwe endaweni yabo yokuphuzela utshwala IDew Drop Inn. Imenyu ye-Hartes igxile enkathini yonyaka, ekuqaleni, ekusungulweni kwayo futhi engabonakala eziphuzweni zabo meu nge-Oatmeal yabo ne-Chocolate Pale Ale okuyintandokazi yemikhosi.
Okuthunyelwe okwabiwe yiBarberstown Castle (@barberstowncastlevenue)
Uthokomele emlilweni phakathi Inqaba yaseBarberstown, indlu yasemaphandleni enhle eyakhiwa ngekhulu le-13. Isimo kule nqaba singesinye esingenakuqhathaniswa, siqinisekisa ukuthi uKhisimusi ongasoze wakhohlwa uzotholakala eBarberstown Castle ucashe emlilweni ovulekile.